Business News Archives » Page 10 of 10 » Lifestyle Myanmar
စီးပွားရေး နဲ့ သံသယစိတ်
OMCTC January 9, 2016 April 5, 2017
by OMCTC January 9, 2016 April 5, 2017 02
အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ယုံကြည်နေရမှာဖြစ်သလို သင်ကျရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုခေတ်ကာလမှာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ အကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့တဲ့ ပြဿနာက ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အခက်ကြုံရတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပြီး လက်လျှော့ အရှုံးပေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်တိုင်က သံသယ ရှိနေတာကြောင့်
စားသုံးဆီလုပ်ငန်းဖြင့် မြန်မာရွာလေးကို တိုးတက်ရန်ကြိုးစားနေသော အိုင်းရစ်စုံတွဲ
OMCTC January 6, 2016 April 5, 2017
by OMCTC January 6, 2016 April 5, 2017 02
အိုင်းရစ်လူမျိုးစုံတွဲ ဂျွန်ဂျန်ကင်စ်နှင့် ကက်ထရီနာခရောဖို့ဒ် တို့၏ မြန်မာပြည် ပျားရည်ဆမ်းခရီးစဉ်သည် ဘုရင်အမှတ်တံဆိပ် စားသုံးကုန်လုပ်ငန်းကို တည် ထောင်ရန် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ဘုရင်တံဆိပ် စားသုံးဆီသည် အိုင်းရစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မြန်မာ ကနေ ပြည်ပသို့ ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော စားသုံးကုန် တင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းလည်း ဖြစ် သည်။
OMCTC January 5, 2016 April 5, 2017
by OMCTC January 5, 2016 April 5, 2017 03
ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု (Money Management) ဆိုတာက ခေါင်းစဉ်ကတိုပေမယ့် အတော်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေခံကျကျနဲ့ မိမိကျင်လည် ၊ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ဒါမှမဟုတ် နယ်ပယ်တစ်ခုခုနဲ့ ယှဉ်ထိုးစဉ်းစားရင်တော့စိတ်ကူးကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှ ရေးသားဖေါ်ပြထားတာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများစုသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေရဲ့ ကနဦးစဉ်းစားချက်တွေကို တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ –
by OMCTC January 4, 2016 April 5, 2017 01
အခွင့်အလမ်း နောက် လာမယ့် ငါးနှစ် အတွက် ထုတ် မသုံးရသေးတဲ့ အလားအလာ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းခန့် ရှိသူတွေကို သင်အံ့အား သင့်သွားပါ ထားဖို့ သင့်ကို ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ လိမ့်မယ်။ ဆိုပါစို့။ သင့်မှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လှုပ်ရှားမှု လူတွေကို
ဂျက်မားရဲ့ အောင်မြင်ကြွယ်ဝချမ်းသာရေး နည်းဗျူဟာ ၁၀ ချက်
by OMCTC January 2, 2016 April 5, 2017 00
ဂျက်မားဆိုတာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ၂၉.၇ ဘီလျံဒေါ်လာအထိ ရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်ဘ၀ကတည်းက ရုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ ဂျက်မားဟာ အာလီဘာဘာကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ပြီး ခုလိုကြွယ်ဝချမ်းသာလာအောင် ဘယ်လိုအချက်တွေက လုပ်ပေးခဲ့ပါသလဲ။ ၁။ ငြင်းပယ်မှုများကို ခံနိုင်စွမ်းရှိပါ။ ဂျက်မားဟာ ကောလိပ်ကျောင်းပြီးတဲနောက်မျာ အလုပ်ပေါင်း ၃၀
by OMCTC January 2, 2016 April 5, 2017 01
၁။ တစ်ပါးသူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးနေပါစေ၊ ကိုယ့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါစေ သူ့ကို ခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်။ လက်လွတ်တတ်ရမယ်။ ဒါမှ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်က ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ၂။ ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရသလို၊ စိတ်ပျက် အားငယ်ချိန်မှာလည်း ဒီအားငယ်မှုတွေဟာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်ရမယ်။ ၃။ ဒီနေ့ရဲ့
သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း သတိပေးနေတဲ့အချက် (၄) ချက်
by OMCTC January 1, 2016 April 5, 2017 06
လူတွေကပြောင်းလဲရမှာကို ၀န်လေးကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပြောင်းလဲပစ်ရမှာပိုပြီးဝန်လေးကြပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့မနှစ်သက် ၀ါသနာမပါ တဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်နေကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် မမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေးပြီး ပြောင်းလဲဖို့ဝန်လေးတတ်ကြတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်အလုပ်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နေပါပြီ။ . (၁) ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေရခြင်း —————————————————– ယခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံဟာတော်တော်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်၊ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလာမယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တွေဟာ
အလုပ်နည်းနည်း ပြီးမြောက်မှု များများနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
by OMCTC January 1, 2016 April 5, 2017 07
တနင်္လာနေ့ ဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတိုင်း ကြောက်တဲ့ နေ့ တစ်နေ့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ ဆိုရင်တောင် တနင်္လာနေ့ အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တီကောင် ဆားတို့ ခံရသလို တွန့် သွားတက်ကြပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ချို့ ကတော့ Monday
‎ကြော်ငြာများ‬ နဲ့ M ၅ လုံး အနုပညာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တီဗီ ကြော်ငြာတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထက် မင်းသားမင်း သမီးတွေကို ကြော်ငြာပေးနေ သလိုပဲ…. သီချင်း မြူးမြူး လေးနဲ့ မင်းသမီး က ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ် က နေတာလေး…ကို သိန်းဆယ်ချီပေးပြီးပြနေကြတယ်…. ပေးချင်တဲ့ message က ပေးချင်းတဲ့ customer ဆီ မရောက်ပဲ…